မြစ်ဆုံ: မောင်မောင်၏ခရီးသွားမှတ်စု (၁)
အပူချိန် ၂၁ ဒီဂရီ လောက်ရှိသော တနင်္လာနေ. နေ.လည် ၁ နာရီခန်.အချိန်၌မောင်မောင်နှင်.သူငယ်ချင်းတို.နှစ်ယောက်ဆရာမမိသားစုဖြင်.ချိန်းထားသောမြေအောက်
ရထားဘူတာသို.ကျောပိုးအိတ်ကိုယ်စီလွယ်ကာ အဆောင်မှ စတင်ထွက်လာခဲ.သည်။ မောင်မောင်အတွက် ဒီနိုင်ငံတွင် သူငယ်ချင်းများရှိရာတစ်ခြားကျောင်းများသို.အလည်အပါတ်သွားခြင်းမှလွဲ၍ပထမဆုံးအကြိမ် ညအိပ်ညနေခရီးထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ရုရှားလူမျိုးများ၏နေထိုင်စားသောက်ပုံကိုလည်း လေ.လာချင်သောကြောင်. ဒီခရီးမှာ တက်ကြွလျှက်ရှိသည်။
ချိန်းထားသည်.နေရာရောက်စဉ် ဆရာမ မိသားစု အသင်. စောင်.နေသည်ကိုတွေ.ရတော. မိမိတို. မိနစ်အနည်းငယ်နောက်ကျနေသည်ကို သတိပြုမိကာ တောင်ပန်စကား ဦးစွာဆိုလိုက်၏။ အချိန်တိကျသော နေရာတွင် အနောက်နိုင်ငံသားများကို အင်မတန် လေးစားမိပါသည်။ မိနစ်ပိုင်းက အစ ဂရုစိုက်ကြသည်။ ထို.နောက် မြို.ပြင်ထွက်သောရထားအတွက် လက်မှတ်များကို အားလုံးအတွက်ဆရာမ သွားရောက်ဝယ်ယူသည်။ ကျွန်တော်တို. နှစ်ဦးအတွက် ပိုက်ဆံထုတ်ပေးမည် ပြုတော. လက်မခံပါ။ သူမကို ကူညီပေးဖို. လာခြင်းဖြစ်သည်.အတွက် သူမဘဲ ကုန်ကျပါရစေ ဟုဆိုလာတော. အားနာစွာဖြင်. သဘောတူလိုက်ရသည်။
သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ရောက်သည်.နှင်. ရထားပေါ်တွင် တက်ရောက်နေရာယူထားသည်။ မိမိနှစ်သက်ရာခုံနေရာ၌ထိုင်နိုင်သည်ဖြစ်၍နေမထိုးသည်.အခြမ်းတွင်မျက်နာချင်းဆိုင်နေရာယူလိုက်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ရထားများကို သတိရမိသည်။ အရာရှိငယ်ဘ၀ တစ်လျှောက် ရထားကို အခေါက်ပေါင်း များစွာ
ဓျေးသည်များကို လုံးဝမတွေ.ရပေ။ရထားစတင်ထွက်ပြီး တစ်ဘူတာခန်.ရောက်တော.မှသာလျှင်
အယှက်ကင်းစွာဖြင်.စနစ်တကျရောင်းချနေခြင်းဖြစ်သည်။မိမိတို.ဘူတာရောက်သည်အထိ စုစုပေါင်းဆယ်ဘူတာ အချိန် ၂ နာရီ ခန်.အတွင်း ဓျေးသည် သုံးယောက်သာတွေ.လိုက်သည်။
တစ်ပါတ်ခန်.အချိန်အတောအတွင်း သူတို.လူမျိုးတွေ နေထိုင်စားသောက်ပုံ နှင်. တော်တော်လေး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ.၏။သူတို.နိုင်ငံအကြောင်းလေးတွေအနည်းငယ်ပြောပြချင်သေးသည်။ ဥရောပ နဲ. အာရှ ကို နယ်နိမိတ်ခြားထားသော သူတို.နိုင်ငံကို ဥရောပဇုန်ထည်းတွင် ထည်.တွင်းရေးဆွဲ ထားသည်။ နိုင်ငံသား အများစုကလည်းဥရောပလူမျိုးများကိုအထင်ကြီးကြပြီးအာရှသားများကိုမှု အထင်အမြင်သေးတတ်ကြသည်။ သို.သော် အာရှလူမျိုးများနှင်. ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် မိသွားသော အခါတွင်တော. သူတို.၏ အထင်သေး စိတ်တွေကို ဖျောက်ဖျက်ကာ ဖော်ဖော်ရွှေရွှေဆက်ဆံလာပါသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသည်အအေးပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်သောကြောင်.အချိန်ကာလအများစုတွင် နေရာစုံ၌ ရေခဲပြင်များ ဖုံးလွှမ်းနေ၏။ထိုစဉ်ကာလတွေမှာပတ်ဝန်ကျင်သို.အလည်အပါတ်အပန်းဖြေခရီးများမထွက်ကြပေ။ ဆောင်းကာလ ရှည်ကြီးကို ကျော်ဖြတ်ကာ နွေကာလ ရောက်သော အခါမှသာလျှင် မိသားစုလိုက်အပန်းဖြေ ခရီးများထွက်ကြပါသည်။ သူတို.နိုင်ငံမှာ မိုးရာသီ မရှိပါ ။ ဆောင်းဦးရာသီ ၊ ဆောင်းရာသီ ၊ နွေဦးရာသီ ၊ နွေရာသီ ဟူ၍ လေးပိုင်းခွဲထားပါတယ်။
နွေရာသီလုံးလုံးရောက်ပြီဆိုလျှင်ကျောင်းများစတင်ပိတ်ပါသည်။ထိုချိန်မှာ ငွေးကြေးတတ်နိုင်သည်.မိသားစုများသည် မွန်းကျပ်လှသည်.မြို.ပြလူနေမှုစနစ်မှရုန်းထွက်ကာလေကောင်းလေသန်.များနဲ.လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သစ်သီး
ပန်းနှံများရရှိနိုင်သည်. ကျေးလက်ဒေသများသို. အပန်းဖြေ ခရီးထွက်ကြသည်။ ထိုရွာကလေးများမှာ အပန်းဖြေ သီးသန်.အတွက် တည်ဆောက်ထားကြသော ရွာများဖြစ်သည်။ ဆောင်းတွင်းကာလတွင် တစ်ရွာလုံး၌ လူလေးငါး ခြောက်ယောက်သာ ရှိသည်ဟု သိရသည်။ထိုသူများမှာလည်း အဘိုးကြီး အဘွားကြီးများသာ ဖြစ်သည်။
ထိုခြံလေးထည်းမှာ သီးပင် စားပင်တွေ စုံစုံလင်လင် စိုက်ပျိုးထားကြ၏။ မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်.ဆရာမ ခြံဝင်းထည်းမှာ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ပန်းသီး၊ ဖရဲသီး၊ စပျစ်သီး၊ သခွားသီး၊ ငရုပ်သီး၊ အရွက်ဆိုလည်း နံနံပင်ကအစ ရှိပါသည်။ တစ်ခြား မြန်မာလို နာမည်မသိသော သီးနှံများလည်း ရှိပါသေးသည်။ မြို.ပေါ်မှာ တိုက်ခန်းဖြင်.သာ နေကျရသော သူတို.အတွက်တော. ရွာက ခြံဝင်းကျယ်လေးဟာ အိုအေစစ်တစ်ခုကဲ.သို. ဖြစ်နေပါတော.သည်။
သီးပင် စားပင် တွေကို ရေလောင်းဖို.အတွက် စည်ပိုင်း ပြတ် သုံးခု ချထား၏။ ထူဆန်းသည်မှာ ရေတွင်းထည်းမှရေကို ခပ်ပြီး တစ်ပြိုက်နက် မလောင်းချေ။ ချထားသော စည်ပိုင်းများထည်းတွင်တစ်ရက်ခန်.ထည်.ထားပြီးမှလောင်းသည်။တွင်းမှရေသည်အတော်အေးသောကြောင်. အပင်များသေနိုင်စေသည်.အတွက်ချက်ချင်းမလောင်းခြင်းဟုဆိုသည်။တွင်းမှ ရေအေးကိုစမ်းပြီး
သောက်ကြည်.လိုက်သောအခါ ရေခဲခန်းထည်းတွင်ထည်.ထားသည်.အတိုင်း အေးစက်နေသည်ကို
ပန်းသီးပင်များကိုကြည်.ပြီး သရေကျခဲ.ရသည်။ နောက်နှစ်လ သုံးလ ခန်.မှသာ ရင်းမှည်.မည်။ အပင်ပေါ်တွင်ပြွတ်ခဲနေသည်ထည်းမှ တစ်လုံးကိုလက်တည်.စမ်းပြီးစားကြည်.တော. သရက်သီးချဉ်သလို ချဉ်နေသေးတော.ကြောင်. လက်လျှော.လိုက်ရသည်။ ထို.နှင် ဆရာမသမီလေး တဲလင်.ရှကာ နှင်.အတူ စတော်ဘယ်ရီ ခင်းထည်းမှာ ချိူမြနေသော နီနီရဲရဲ စတော်ဘယ်ရီသီးများကို နှစ်ယောက်သား အပြိုင် ခူးလိုက် ပါးစပ်ထည်း ထည်.လိုက်နဲ.လုပ်နေသည်မှာအနီရောင် အသီးလေးများ မကျန်တော.သည်.အထိပင်။
ဆရာမနဲ. ဆရာမ အမေတို. စီမံသော ရုရှားအစားအစာများကို လည်း အင်မတန် နှစ်ခြိုက်မိ၏။
မြန်မာအစားအစာနှင်. ဆင်တူသည်ဟူ၍ ပြောနိုင်သော နေ.လည်စာ တစ်နှပ်သာ ပါသည်။ ထမင်းပေါင်းကို အသားများ အာလူး ခရမ်းသီးများဖြင်. ရောမွှေထား၏။ သူတို.အခေါ် ထမင်းနဲ.အသား ။
ပုံထည်းကအတိုင်းထမင်းနဲ. အသားကို ဇွန်းမပါဘဲ ခက်ရင်း နဲ. မွှေပြီးစားရသည်။ ဇွန်းတစ်ချောင်းတည်းဆိုလျှင်စား၍ ရနိုင်ပေမယ်. ခက်ရင်း တစ်ခုတည်းက ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်တော. ဆရာမကိုအခြေအနေပြောပြဇွန်းတောင်ပီးစားရသည်။ သူတို.အစားအစာတွေထည်းမှာအစပ်မထည်.ပါ။အစပ်ကြိုက်သော တောင်ပေါ်သား မောင်မောင် ခြံထည်းက ကြိုခူးထားသောငရုပ်သီးတောင်.ကိုကိုင်ပြီးစားတော.အဘိုးကြီးအဘွားကြီးမျက်လုံးတွေ ပြူးကုန်သည်။
ခြံထည်းက ငရုပ်ပင်ကလည်း မြန်မာကျောင်းသားများသာ စိုက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by မောင်မောင် at 01:03
အယ်.. အစ်ကို ရွာရောက်ခဲ့တယ်လား.။ အားကျလိုက်တာဗျာ.။
မောင်မောင်ရေ ရုရှ အစားအစာတွေကြိုက်တတ်နေပြီပေါ့
နံနံပင်လဲရှိတယ်နော် ပန်းသီးပင်ကြီးလိုက်တာ အဲလောက်ကြီးနေတဲ့ပတ်းသီးပင်ကိုခုမှမြင်ဖူးတယ်
ညီလေးရေ သွားချင်တယ်ဆိုရင် ညီလေးဆရာမကိုပြောပြီး အလည်လာချင်တယ်လို.ပြောလိုက်ညီလေး။
ခရီးတွေသွားနေတော့ ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရခဲ့တယ်ပေါ့.မောင်မောင်. :):)
ရောက်တောင် ရောက်ဖူးချင်ပါရဲ့.. အဲ့ဒီရွာလေးကို..း)
မသိတာတွေတော.အများကြီးသိခဲ.ပါတယ်အစ်မအိန်ဂျယ်။ အစ်မကြည်ဖြူရေရောက်ဖူးချင်တယ်ဆိုရင် လာခဲ.ပါဗျို.။
လွင်ပြင်တို့ကိုလဲ အလည်ခေါ်နော် မောင်မောင် ။
ဟုတ်ကဲ. အစ်ကိုလွင်ပြင် နောက်တစ်ခေါက်သွားရင် လှမ်းပြောလိုက်မယ်ဟဲဟဲ
လာလည်သွားပါတယ်။ ခရီးသွားခြင်းဟာ ဒေသန္တရဗဟုသုတနဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း၊ စိတ်လက်ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါတယ်။ တနှစ်ကို အနည်းဆုံး တခေါက်(သို့) နှစ်ခေါက်လောက်တော့ ခရီးသွားသင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကိုယ်လုပ်မဲ့အလုပ်မှာ တက်ကြွပြီး အားအင်တွေ ပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်။